Nepal Galleries: योमरीको कथा
ऐतिहासिक कथा अनुसार पाञ्चाल देश (हालको पनौती) मा सुचन्द्र महाजन नाम गरेका एक दानी र धर्मात्मा दम्पति बस्दथे । उनकी पत्नी भगवान् विष्णुका परम भक्त थिए ! उनीहरुको दयालु स्वभाव संसारभर फैलिएको थियो ।
एक दिन कुबेरलाई सुचन्द्र महाजन दम्पति कत्तिको भक्तालु रहेछन् भनि बुझ्न मन लागेछ ! कुबेरले एक दरिद्र रुप धारण गरि उक्त महाजनको घरमा माग्न पुगेछन् । महाजन दम्पतीले दरिद्र रुपी माग्नेलाई स्वागत सत्कार गरि पकाएर राखेको यमरी सहित मिठा मिठा खानेकुरा खुवाउनुको साथै श्रद्धा गरेकाले कुबेर अत्ति प्रशन्न भै आफ्नो सक्कली रुप देखाएछन् र ति महाजन दम्पतिलाई यःमरीको गुण र धानको भकारीमा श्री गणेश, कुबेर, लक्ष्मीको पूजा गरी यःमरी चढाउने विधि दीक्षा प्रदान गरि अन्तर्ध्यान भएछन् । त्यो दिन मंशिर शुल्क पुर्णिमा अर्थात थिंलाथ्व पुर्णिमाको दिन थियो ।
कुवेरले दिएको दीक्षा अनुसार महाजन दम्पतिले तिलको धुलो र चाकुको झोल मिश्रित पदार्थ राखी चामलको पिठोको रोटी / योमरी बनाई अन्न राख्ने भकारीमा राखेछन् ! साथै कुवेरले दिएर गएको बिमिरोलाई पनि त्यहि विधिपूर्वक स्थापना गरि ४ दिन सम्म छोपेर राखी पुजा गरेछन् ! अनि अन्न, धान र योमरी दान पनि गरेछन् ! भकारीमा चढाएर चार दिनपछि प्रसादका रुपमा बाँडेर यमरी खाएकाले शरीरसमेत हृष्टपुष्ट हुन थालेछ, धन सम्पत्तिको बृद्धि हुन थालेछ र आम्दानी पनि बढ्न थालेछ ।
विस्तारै यो कुरा जताततै फैलिएपछि त्यही समयदेखि नेवार समुदायमा यःमरी पूर्णिमाको संस्कृति विकास भएको विज्ञहरु बताउँछन् । यसरी कुबेरले भने अनुसार धन धान्य भएको हुनाले त्यहि बेलादेखि मंशिर पुर्णिमाको दिन भर्खरै भित्राएको धानबाट योमरी बनाएर खाने र पर्व मनाउने चलन चली आएको भनाई छ ।
- "रत्नाबदान बुद्ध वचन" पुस्तकमा उल्लेखित कथाको सारांस !
नोट : नमोबुद्धको कथामा प्रस्तुत विश्वन्तर राजकुमार यिनै पांचाल देशका राजकुमार थिए !
Mero siddhipur Chautari May 17, 2020 at 2:36 PM
यसमा पनि केहि कमि कमजोरीहरू देखिन्छ | https://youtu.be/P69V-acS-iI यस बाट पनि केहि प्रमाणहरू लिन सकिन्छ कि